Ukuhonjiswa kweMigangatho ePhambili yoPhuculo lweMoya oMdaka China Manufacturer
Inkcazo:Ukucoca umoya Humidifier,Ukuhombisa umswakama womoya,Umgangatho ophezulu womoya wokuphefumla
Home > Imveliso > Ihotele Humidifier > Ukuhonjiswa kweMigangatho ePhambili yoPhuculo lweMoya oMdaka
Umzekelo No.: DT-1745
Ukunyibilikisa umoya kudala imeko ekusetyenzwa ngokusempilweni kuwe nakwabathandekayo bakho; Ukuhlangula allergy kunye neempawu ezibandayo kwaye ugcwalise umoya ngomswakama ukugcina ulusu lwakho kunye nefenitshala yakho yeenkuni.
Ichiza lokunyibilikisa lizalisa umoya ngevumba elithandekayo elinokuphakamisa imimoya, ukunciphisa uxinzelelo kunye nokungcwaba amavumba angathandekiyo.
Ixesha elide elibalulekileyo lokunyibilikisa ioyile; Iyashukuma kwaye ihambisene, i-humidifier yeoyile inokuqhuba ukuya kwiiyure ezili-12 ngqo ngaphandle kokugcwaliswa kwamanzi. Ungayivula ngaphambi kokuba ulale kwaye i-humidifier yasekhaya iya kubaleka phantse ubusuku bonke. Yiva impembelelo yokuphumla kunye nokucoca emzimbeni wakho nasengqondweni yakho xa uvuka.
Uyilo oluhle loPhononongo lweMihla yokuGcina: Igumbi lokunyibilikisa kubandakanya izibane ezi-7 zokutshintsha umbala (nganye inezindlela eziqaqambileyo nezifipheleyo) ezidibanisa kunye nokwazisa ikhaya lakho, iofisi, isitudiyo seyoga, umthambo, ipatio kunye naliphi na igumbi ngokwenene.
I-100% yoxolo lwengqondo: Umatshini ovale ngokuzenzekelayo izixhobo kunye neBPA-engenzixhobo
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa - vele uvule isiciko, emva koko ulandele incwadana yomsebenzisi ukuze isebenze, yongeza i-3-5 yehla kwioyile yakho oyifunayo kwaye ukhanyise useto olufunayo.
I-humidifier ephathwayo ephathekayo ukuze ukwazi ukubeka naphi na apho ufuna ukuya khona - indawo yokuzivocavoca, iklasi yeyoga, igumbi labantwana, iofisi, i-spa kunye negumbi lokulala.
Isipho esigqibeleleyo - ukonakalisa abo ubathandayo ngesi sipho sangempela kunye nesingafaniyo (indlu yonke yokunyibilika) eya kuthi iphucule ubomi babo.
UkuSebenza kweMpazamo kweMpazamo epholileyo:
Isicelo seAriffatherapy Diffuser:
Ukucoca umoya Humidifier Ukuhombisa umswakama womoya Umgangatho ophezulu womoya wokuphefumla Ukucoca Humidifier Usbvuta umoya Humidifier Ukucocwa kwekhaya Humidifier Umoya Humidifier Uk Umoya Humidifier 2019